अण्डा तारेर खाने कि उसिनेर ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
अण्डा तारेर खाने कि उसिनेर ?
अण्डालाई धेरैबेर पकाउँदा यसमा पाइने धेरैजसो पोषक तत्वको नष्ट हुन्छ तर अण्डा धेरैबेर उसिन्दा भने त्यसबाट थोरै मात्रामा मात्रै पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । अण्डा उसिन्दा त्यसको रानी (पहेँलो भागमा) एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा कम हुनसक्छ । जर्नल अफ एग्रिकल्चरल फूड केमेस्ट्रिमा प्रकाशित एक अध्ययन अनुसार अण्डा उसिन्दा त्यसको रानीमा एन्टीअक्सिडेन्ट सामग्रीमा २२.५ प्रतिशतको कमी आउन सक्छ । धेरै बेर उमालिएको अण्डाको तुलनामा थोरै बेर उमालिएको अण्डामा धेरै पोषक तत्व पाइन्छ । तसर्थ, तारेर बनाएको अण्डा मिठो लाग्छ भने मध्यम आँचमा धेरैबेर नपकाइकन खानुपर्छ र यदि उसिनेको अण्डा रुचाउनुहुन्छ भने पनि लामो समयसम्म नउमाल्नुहोस् ।
प्रकाशित मिति : आश्विन १५, २०७७ बिहीबार ९ : ११ बजे